Joachim Low Oo Cafis Weydiisanaya Mesut Ozil Oo Uu Qayb Ka Ahaa Dhibkii Loo Geystay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJoachim Low Oo Cafis Weydiisanaya Mesut Ozil Oo Uu Qayb Ka Ahaa Dhibkii Loo Geystay
Joachim Low Oo Cafis Weydiisanaya Mesut Ozil Oo Uu Qayb Ka Ahaa Dhibkii Loo Geystay
Tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Low, waxa uu qayb ka ahaa dhibaatadii la gaadhsiiyey Mesut Ozil intii ka dambaysay Koobkii Adduunka 2018, markaas oo dusha loo saaray guul-darradii soo gaadhay xulka, sidoo kalena cadaadiskii la saaray uu ku qabsay inuu ka fadhiisto ciyaaraha caalamiga ah.
Saddex sannadood kaddib, Joachim Low ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Mesut Ozil si ay iskaga laab-xaadhaan dhacdadaas, iyo wixii kala gaadhay, laakiin laacibkan Muslimka ah oo waqtigan ka ciyaara waddanka Turkey ayaan la hubin in uu aqbali doono.
Tababare Low ayaa xulka qaranka Germany ka tegay markii ay soo dhamaatay ciyaartii England ku garaacday xalay, waxaanu kulankaasi ahaa midkii ugu dambeeyey ee uu layliyo sidii uu horeba usii sheegay.
Musut Ozil oo xulka qaranka Germany kulankii ugu horreeyey u saftay 2009, waxa uu ogsoon yahay in Low uu ahaa tababarihii kalsoonida siiyey ee sababta u ahaa inuu markiiba noqdo hoggaamiyaha xulka, isla markaana booska joogtada ah ka siiyey Koobkii Adduunka 2014.
Si kastaba, Ozil ayaanay niyaddiisa ka baxsanayn in dhalleecayntii iyo dhibaatadii kasoo gaadhay Koobkii Adduunka 2018 ay keentay in ciyaartiisu hoos u dhacdo, isla markaana uu kursiga kaydka Arsenal galo, illaa uu waddanka uu asal ahaanta kasoo jeedo ee Turkey uu tegay.
Maxay ahayd sababtii Ozil u fadhiistay?
Waxay ahayd mid aan inta badan ku xidhnayn ciyaartiisa, waana dhalleecayn iyo canaan siyaasadaysnayd. Ka hor intii aanu bilaabmin Koobka Adduunka ayuu Ozil la kulmay madaxweynaha Turkey, Recep Tayyip Erdogan oo waqtigaas booqanayay UK, waxaana sidoo kale ay is-arkeen Ilkay Gundogan. Labadan ciyaartoy oo asal ahaan reer Turkey ah ayaa madaxweynahooda sawirro ay la galeen soo dhigay baraha bulshada.
Jarmalka iyo Turkey oo aan waqtigaas isku fiicnayn ayaa waxay keentay in xidhiidhka kubadda cagta Germany uu hadallo qadaf ah si gaar ah ugu duro Ozil, waxaana qoraalkii uu laacibkani ku sheegayay inuu ka fadhiistay u ciyaarista xulka Jarmalka uu ku yidhi: “Cunsuriyad iyo ixtiraam darro ayay ii muujiyeen xidhiidhka kubadda cagta Germany.”
Waxa kale oo laacibkan weerarro ku qaaday siyaasiyiinta dalkaas oo qaarkood soo jeediyeen in lagala noqdo dhalashada, loona tarxiilo Turkey.
Joachim Low ayaa yidhi waqtigaas: “Aad ayaan uga niyad-jabsanahay sida uu Ozil u maamulay xaaladda”.
Sannadkii 2019 ayuu Low wargeyska Bild u sheegay: “Aniga waxba nagamay dhaxaynin Mesut Ozil. Waxa uu tegay isagoo aan ii sheegin inuu shaqsiyan iisoo wacayo. Wakiilkiisa ayaa ii sheegay in Ozil uu maalin kaddib isoo wici doono si uu iigu sharraxo wax walba, laakiin taasi may dhicin.”